Ubuntu 12.04 Beta 1 dị! | Site na Linux
Dị ka ọ dị nyere na oge ntọhapụ, Canonical bipụtara na March 1 nke mbụ beta de Ubuntu 12.04 LTS Ezipụta Pangolin. Nke a bụ ihe na-esote mụ na ntọhapụ na agbatị nkwado Akọwaputara ya ma ugbu a ọ ga-abụ naanị ịkọwa nkọwa.
Dị ka ọtụtụ ga-ama, nsụgharị LTS ọzọ ga-abụ Ubuntu 12.04 Precise Pangolin, ga-apụta na Eprel afọ a. Ọ usoro mmepe n'ihi na nke a version ọ bụ dị ka ndị:
Disemba 1, 2011-Ubuntu 12.04 Alpha 1
Abụọ 2, 2012-Ubuntu 12.04 Alpha 2
Machị 1, 2012-Ubuntu 12.04 Beta 1
Machị 29, 2012-Ubuntu 12.04 Beta 2
Eprel 19, 2012-Ubuntu 12.04 Release Candidate
Eprel 26, 2012-Ubuntu 12.04 Mwepụta Ikpeazụ
Gịnị dị ọhụrụ n’okpuru anyanwụ?
Mgbanwe kachasị dị mkpa banyere Ubuntu 11.10 dị ọtụtụ, dịka ntinye nke HUD (nke na-egosi mgbe ịpị igodo Alt), ihe nzacha ọhụrụ (lenses), ntọala kachasị mma na ihuenyo ụlọ kachasị nke nwere atụmatụ ọhụrụ. Ọzọkwa, arụmọrụ zuru oke nke sistemụ arụmọrụ kawanye mma.
N'agbanyeghị nke a, Unitydị n'otu ka jọgburu onwe ya dị ka ọ dị na mbụ, mana ugbu a ọ dị ngwa karịa ma iji ya eme ihe na-anabata nke ọma HUD. Ihe m masịrị bụ ntinye nke nhicha ọhụrụ ahụ iji nweta vidiyo, ma ọ bụ site na ọrụ ntanetị kachasị ewu ewu (YouTube, Dailymotion, wdg) ma ọ bụ site na folda anyị.
Nhọrọ nzuzo ọhụụ na-enye gị ohere ịtọ folda ma ọ bụ ụdị faịlụ dị iche na ndekọ ọrụ Ubuntu. Karịsịa, na ngalaba nhazi usoro enwere nhọrọ nzuzo ọhụrụ ka anyị nwee ike hazie iji nụrụ ụtọ ihe omume Ubuntu nwere ike ịdebanye aha (ozi ngwa ngwa, ọdịyo, weebụ, vidiyo, e-mail, na ụfọdụ ndị ọzọ). Ọ bụrụ na anyị achọghị ka ihe ọ bụla dekọọ, enwere bọtịnụ iji kagbuo ihe ndekọ niile na otu arụmọrụ.
Kdị kernel nke beta a na-eweta bụ 3.2.0-17.27, dabere na kernel Linux 3.2.6 na-adịbeghị anya. Nke a nwere ike gbanwee na ụdị ikpeazụ, dịka ngwa. Ndabere ihe nchọgharị bụ Firefox 11, ngwaahịa nke dịkwa na beta n'oge a. E nyefere LibraOffice 3.5 nke ngalaba akpaaka ọrụ, ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya.
Anyị ga-ahụ na beta a na njikwa faili Nautilus na nsụgharị 3.3.5 na ngbanwe ọzọ na ndọtị multimedia ndabara, nke bụ Rhythmbox ugbu a, yana nkwado gụnyere maka Ubuntu One Music Store.
N'ikpeazụ, rịba ama na agbakwunyere nkwado maka ngwa ngwaike a na-ahụkarị na ụfọdụ ndị na-emepụta laptọọpụ: ClickPads (akara aka na bọtịnụ agbakwunyere).
Budata Ubuntu 12.04 Pangolin Beta 1
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ubuntu 12.04 Beta 1 dị!
Artemio kpakpando dijo
Agaghị m eguzogide ya, emegoro m kọmputa m desktọọpụ. Enwere m mmasị karịsịa Unity ma hụ na ọ na-emeziwanye.
Igwe nyocha vidiyo ọhụrụ ahụ apụtaghị, m ga-achọta ya ma wụnye ya.
Enwere m mmasị na ihe ha mere na Ogwe Unity mgbe ọ na-ezo, ọ na-ewe iwe na ọ ga-apụta mgbe mmadụ rutere nso, ugbu a ọ naghị eme ya ozigbo.
Agbalịrị HUD ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ọ naghị egosipụta na igodo ALT. Echeghị m na ọ ga - abụ ihe eji eme ihe kwa ụbọchị, mana ọ ga - aba uru mgbe ị na - achọ nhọrọ na menu, nke siri ike ịchọta.
Nhọrọ nke akwụkwọ ahụaja onye ọrụ gosipụtara site na nbanye arụghị ọrụ. Jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ na nwụnye site na ncha ọ bụghị na mmelite ahụ.
Zaghachi Artemio Estrella
Daalụ maka nzaghachi!
Christian yones dijo
Ekwetaghị m na iwepu nhọrọ maka launcher ka ọ bụrụ ihe zoro ezo oge niile. Ọ bụrụ na enweghị m windo ọ bụla mepere na desktọọpụ, ọ bara uru ma ọ dị mma ka m nwee ya iji bido ngwa. Aghọtaghị m iwu a nke iwepụ nhọrọ, ha nwere ike ịhapụ onye ọrụ ka ọ kpebie omume nke kachasị adaba maka ya.
Zaghachi Cristian Yones
Enweghị m ndidi ịnwale ya (Achọrọ m ịdepụta akwụkwọ ndetu m), mana iji zere mbipute m kpebiri ịgbanwe naanị na LTS ... Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana amaara m na site na nnwale m zigara onwe m ụfọdụ grossas. Otu ọnwa ọzọ, otu ọnwa ọzọ, biko, mana ka ọ bụrụ Eprel !!!
Zaghachi Mauro Nicolás Ybáñez Girard
Ana m eji ụdị 64-bit, eziokwu bụ na ọ juru m anya, ọ na-agbanye ọsọ ọsọ, ọ na-agbanyụ ngwa ngwa, ndị ọkwọ ụgbọala nweere onwe ha dị ukwuu. interface maka nkesa desktọọpụ dị mma. firefox ijiji. ụlọ ahịa ngwanrọ ahụ dị ukwuu, ngwa ngwa ma dịkwa mfe. dị ezigbo mma mwekota iji wụnye nchịkọta nchịkọta. ọbụna ụbọchị ndị ọzọ sọftụwia ahụ doziri ihe ndị m dabere n'onwe ya. ndozi ndozi ndozi na nautilus di otutu. mgbe nke ahụ gasịrị, anyị nwere ngwaahịa ọzọ mara mma dịka lucid bụ
onye na-eme ihe dijo
Ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, ị nwere ike hazie oge nzaghachi nke onye na-ebupụta ihe na Unity configurator.
PS: Ebe ọ bụ na ị zụrụ ya, atụkwala ya ọfụma. Akpa m kewara nkewa itinye 9.04, emesiri m kwalite na 9.10 na 10.04, yana dịka m siri sie ike na ya nke ukwuu, anaghị m etinye echichi efu ... echere m na ọ bụrụ na ọ bụghị maka mkpa ịnwale nrụnye dị ọcha. M ka ga-echekwa ego afọ atọ ọzọ iji mezie mmezi ahụ. N'aka nke ọzọ, desktọọpụ m pc ...
Ighaghari akwụkwọ ahụaja nke Trisquel, Slackware na Puppy + splash maka Gimp